We Fight We Win. -- " More than Media ": သမ္မတ ရုံး အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု ကို ထောက်ခံ နေပြီလော
သမ္မတ ရုံး အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု ကို ထောက်ခံ နေပြီလော
My dog’s playing is good because of my dog.
My religion is good because of my religion.
(Great Philosopher Socrates)
ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်း ဟာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်လှုံဆော်မှုတွေ ကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ သိရှိအောင် ထုတ်ဝေ ရေးသားဖော်ပြ လေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် မဂ္ဂဇင်း ကြီးတစောင်ဖြစ်တယ်။
ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ မတရားမှုတွေ၊ ကစ်သလစ်ဘုန်တော်ကြီးတွေရဲ့ လိင်တူဆက်ဆံသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးမှု နှင့် ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံတွေ၊ မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့သည့် တာလီဘန် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီအကြောင်းတွေ၊ ကို ကမ္ဘာလူထုသိအောင် လူသိရှင်ကြား ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သလို၊ ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရေးသား ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။
ဒီလို ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုတွေ နှင့်ဘာသာရေး ကို ခုတုံး လုပ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း က လက်မခံပေမဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှန်းမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို စနစ်တကျ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် သတ်ဖြတ်မှု၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်လှုံဆော်မှုတွေ ကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ သိအောင် ထုတ်ဝေ ရေးသားဖော်ပြ ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်း ကြီး ကို
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အဖွဲ့ ကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးသားဖော်ပြမှု ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အထင်အမြင်လွှဲမှားစေပြီး၊ ဘာသာပေါင်းစုံအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ကို ထိခိုက်စေသည့် အတွက် ကန့်ကွက် ကြောင်း သမ္မရုံးဝက်ဆိုက် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထင်အမြင်လွဲမှားစေပြီး လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဘာသာပေါင်းစုံတို့အကြား အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေခြင်း ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ - See more at: http://www.dawnmanhon.com/2013/06/blog-post_3079.html#sthash.AdGN7MxS.dpuf
နိုင်ငံရေး မှာ ဘာသာရေး ကို အသုံးချနေမှု
( Religion asaPolitical Tool)
မြန်မာ နိုင်ငံ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် သံဃာတော် တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဟာ ကမ္ဘာလူသားတွေ တအံတသြ ဖြစ်စေခဲ့ယုံသာမက နအဖ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တွေ ( လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ) တုန့်လှုန့်ခြောက်သွားစေခဲ့တယ်။ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော် တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် ရဟန်း သံဃာတော် တွေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစီက ဆွမ်း အလှူမခံ သည့် အဆင့်ရောက်လာတော့ ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နိုင်ငံတကာ မှာ အရှက်ရလာစေခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော် တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ နောင် ရွှေဝါရောင် သံဃာတော် တို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို မှေးမှိန်အောင် တုံ့ပြန်ဖို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အလိုတော်ရိ ရဟန်း သံဃာတော် တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းး ဖွဲ့ကာ စစ်အစိုးရ အကြပ်ရိုက်တိုင်း နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်ရအောင် ဘာသာရေး အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ပြီး စနစ်တကျ စတင် လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ နယ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး အကြက်ဖက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင်တွေ အားပေးထောက်ခံ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တန်ပြန် လျှို့ဝှက် အဖွဲ့ က နိုင်ငံတ၀ှန်း မှာ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတာ ကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ နှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရ တွေ က သတိထားမိလာကြတယ်။ ဒီ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စုံစမ်းအရေးယူဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသလို၊ တရာမျှတ စွာ အရေးယူခဲ့ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါ။
တကယ်လို့ သာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ထုတ်ပါက ယင်းအကြမ်းဖက်မှု တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင်တွေ အားပေးအားမြောက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တန်ပြန် လျှို့ဝှက် အဖွဲ့ က စွမ်းအားရှင်လူငယ်တွေ၊ ရဲမွန် ရဲညွှန့် လူငယ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကိုးကွယ် အားထားနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ နောက်ကွယ်က ပါဝင်ပက်သက်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး အကြက်ဖက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားလာစေသည့် လှုံဆော်မှုများ၊ စစ်အစိုးရ ကို ဆန့်ကျင်သည့် အတိုက်အခံတွေ ၊ လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူတွေ ကို အင်တာနက် တွေ မှ တဆင့် လည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်လာတာ တွေ့လာရတယ်။
ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်းကြီး က မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ လူသိရှင်ကြား ကမ္ဘာကို ဖော်ပြလိုက်ပြီးနောက် ၊ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သမ္မတ ရုံးအဖွဲ့ က TIME မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှု ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ကြောင်း သမ္မတရုံး ၀ပ်ဆိုက်က နေဖော်ပြတဲ့ အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။
လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် ကို အကာအကွယ်မပေးသည့် အပြင်၊ ယခင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင်တွေ အားပေး ထောက်ခံ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တန်ပြန် လျှို့ဝှက် အဖွဲ့ ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို တရားဝင် ထောက်ခံကြောင်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာနေပြီလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အာဏာရူး ၊ နေရာရူး ၊ တောက်ရူး ၊ ဂေါက်ကြောင် ငကြောက်ကြီး ဖတ်ရန်အတွက် ကျမ လာပေးခဲ့ပါသည် ။